Indlu, indlu | Umlimi wasemadlelweni we-intanethi | April 2020
Isigaba Indlu, indlu
"Ukuvikelwa kwesibopho"! Amakolishi athungathayo: isimiso sokusebenza, imithetho yesicelo, kanye nezindleko ezijwayelekile
Ukuqala kwezinsuku ezifudumele kubanikazi bezilwane akuletha nje injabulo yokuhamba okuhlangene, kodwa futhi inkinga nge-fleas, imikhaza. Izinambuzane ezincane zimelela ingozi empilweni nasekuphileni komndeni onobuhlungu, njengoba bephethe izifo ezithathelwanayo. Indlela enhle kakhulu ekubhekaneni negazi eliyingozi i-collar ekhethekile.
Isebenza kanjani? Ukuwa kwezingulube kanye nemikhaza eminyameni
Ukuwa kwezingulube kanye nemikhaza, kanye ne-collars kanye ne-sprays - indlela ethandwa kakhulu yokulwa nama-parasites ezifuyweni. Ziyonke indawo, kulula ukuyisebenzisa futhi ezingabizi. Ake sizame ukuwaqonda ngokuningiliziwe. Indlela yokwenza Zonke amaconsi afanayo. Izithako ezisebenzayo ziqoqa ku-epidermis, ama-hair bulbs, namafutha angaphansi kwesikhumba.
Abadala bazositshela! Amakhambi omphakathi we-fleas: amafutha abalulekile, i-lavender nabanye
Phakathi kwezinambuzane ezondla igazi ezingaphazamisa kakhulu ukuphila komuntu, indawo ekhethekile igcwele amaferesi. Ziyakhulela, zithwala izifo eziyingozi, futhi ziyahlukahluka ngokuthi kunzima kakhulu ukuziqeda. Ukulunywa okukhukhulayo kuyabuhlungu kakhulu. Ukulwa nezinambuzane zasendlini ezindaweni zokuhlala nezindawo zokuhlala kwenziwa ngezindlela ezihlukahlukene.
Baqede! I-fleas yabantu ekhanda: indlela yokuqeda izinyathelo zokuvimbela
Kuvela ukuthi izintambo azitholakali kuphela ezilwaneni. Kukhona isikhubekiso somuntu. Ngaphambilini, wayehlala kuphela kuleli zwekazi laseNingizimu Melika, futhi manje uhlala lapho umuntu ehlala khona. Ukukhala kwalezi zinambuzane kuletha abantu izinkinga eziningi. Abahlali emzimbeni womuntu ngaso sonke isikhathi, ngoba uma kuqhathaniswa nomzimba wezilwane, awunayo izimila ezinomsoco.
I-flea umbuso wokuduma kwezulu - "iLeopard" yehla ngokumelene ne-fleas nemikhaza, kanye nama-shampoos, ama-sprays nama-collars
Abangane abangcono kakhulu bayizilwane. Imindeni eminingi inesilwane esinomsoco endlini yabo noma efulethini - ikati noma inja. Lokhu kuyinjabulo enkulu, kodwa futhi nomthwalo wemfanelo, okubandakanya ukunakekela impilo yezilwane. Ngokuvamile, izilwane ezifuywayo zibhekene nezinhlekelele ezivamile - amafleas kanye nemikhaza. Udinga ukubhekana nale nkinga ngendlela ephumelelayo ngangokunokwenzeka.
Ukukhipha ekhaya lakho! Indlela yokuqeda amafleas efulethini ngokuzimela nangokubandakanya izinsizakalo ezikhethekile
Izintambo zasemakhaya azikwazi ukubalwa phakathi kwezakhamuzi ezifunayo nezisebenzayo zendlu! Bahlasela abantu, baluma futhi babangela izinkinga eziningi. Ukudikibala ukubhujiswa akufanele, ngoba lezi zinambuzane ziphindaphinda ngejubane elesabekayo. Indlela yokulwa? Uma kukhona izilwane ezifuywayo endlini, into yokuqala okumele ukwenze ukukhipha ama-parasite kubo.
Konke kunokuba ungakwazi ukubulala ama-parasites! Izindlela eziphumelelayo zamafaysi: ama-shampoos, amagciwane, ama-sprays nabanye
Uma i-fleas itholakala esilwaneni, kunconywa ukuthi izinyathelo zithathwe ngokushesha, ngoba izinambuzane zingabangela ukulimala kakhulu kwesilwane. Amathikithi ayingozi kakhulu, ngakho-ke uma kunconywa izilwane ezihambayo ukugcina izinyathelo zokuqapha. Uma ukhetha umkhiqizo wokulawula izinambuzane, okokuqala, kufanele ugxile ekubunjweni komkhiqizo, ngoba ukuba khona kwamakhemikhali amaningi kungabangela ukushisa isikhumba noma ukuphelisa umzimba.
Akekho ophephile! Ukuqubuka kwabantu: izinhlobo nokulimala
Isiphetho sokuthi izinhlanzi zingaphila kumuntu uvunyelwe njalo. Abahlali kubantu, empeleni, ngamakati, izinja, ezinye izilwane nezinyoni. Basebenzisa umuntu njengendlela yokuthutha uma bengalutholi ngokuzenzekelayo eduze kwezinto ezifanele (inja ephazamisayo, ikati, isilwane, njll)
Sibutsetelo abakhiqizi bemikhiqizo ekhuni: I-Advantix yamakati, i-Hartz, yehla i-Barrier neminye imikhiqizo
Izolo isilwane sakho sasijabule futhi sijabule, kodwa namuhla sibonakala siqaphele? Ngokungazelelwe agijimela udoti, ehlaya uboya bakhe ngokuhamba kancane? Cishe, izivakashi ezingamenywanga - amaferesi - athole isilwane sakho. Uzosho ukuthi ikati ayishiyi indlu, futhi inja iyahamba nge-leash futhi ingahlangani nezinye izilwane futhi ayikwazi ukutheleleka nalezi zinambuzane.
Kusukela esilwaneni kuwe noma esilwaneni esiluhlaza kumuntu! Izinhlanzi ezingamakati ziyingozi kangakanani kubantu?
Ungagoma cishe zonke izifo. Izimboni zezinkanyezi zihlala iminyaka esiteshini se-orbital. Ubuntu akulona namuhla - kusasa luzobhekana nomdlavuza ne-AIDS. Futhi sesaba izinhlanzi! Futhi lokhu akumangalisi. Wahlala iminyaka eyizigidi ezingu-55 edlule. Izimo zemvelo ezabulala ama-mammoths azange zenze umonakalo omncane kulezi zinambuzane.
Vikela ingane yakho! Izinhlanzi zine-hamsters indlela yokuzala ama-parasites
Abaningi endlini banenhlanzi. Nakuba enhle, angase abe nezinhlanzi. Abahlali nje kuphela, kodwa futhi baya kwezinye izilwane ezihlala ekamelweni elifanayo. Ukuqaphela izilwanyana ezivela kumfana omncane ongenalutho kuyinkinga, ngoba uhlale ehlanzekile. Noma kunjalo, kungenzeka ukuthi uqaphele ukuthi kukhona okungahambi kahle ngenxa yokukhishwa njalo namanxeba ngaphansi kwejazi.
Ukubuyekezwa kokuphumelela kakhulu! Imithi yokwelashwa endlini: ukuphanga, ukuhlasela nokunye
Izindwangu zasekhaya - inkinga enkulu! Izinambuzane ezincane ezicasulayo ziyaluma kabi futhi zanda ngokushesha. Kodwa ukuletha laba "omakhelwane" kufanele basebenze kanzima. Akuzona zonke izinambuzane ezifanele ukubhujiswa kwegazi! Izinhlobo zama-anti-flea insecticide Ama-Fleas yi-monophages ezondla kuphela igazi, ngakho-ke akukho nhlobo ekusebenziseni i-bait.
Just drop, kodwa njengoba khulula! Ukuwa amafaysi Inzuzo yamakati, imiyalelo yesidakamizwa
Inzuzo (Inzuzo) - indlela yokulwa nezinhlanzi ezifuywayo, ekhishwe yi-brand brand yaseJalimane iBayer HealthCare AG. Ngesikhathi sisekhona, lesi sidakamizwa sasihlolwe ngabaningi bama-veterinarians abanolwazi kanye nabanikazi bekati. I-agent ye-insecticidal ephumelelayo kakhulu ivikela izilwane ezifuywayo ezikhungweni zegazi eziphuza igazi, futhi nazo eziphethe izifo eziningi ezithathelwanayo.
Vikela i-purr yakho! Uphonsa ingwe yamakati kanye nezinye izindlela zombusi ovela emafreyini nasemikhawulweni
Amathikithi kanye nama-fleas ayingozi abathwala izifo ezingabangela imiphumela engenakuguquka emzimbeni womuntu. Akuzona eziyingozi kakhulu empilweni yezilwane ezifuywayo. Ukuze uvikele ikati lakho emalangeni omlenze noma ukutheleleka kwesifo, ungasebenzisa imithi ephephile. Isidakamizwa seLeopard sizovikela lesi silwane futhi sizovumela abantu ukuba bangesabi ukuletha izinambuzane eziyingozi endlini.
On ukuvikelwa amakati akho! Ummeli: ikati elikhukhumezayo kanye namaconsi omuthi
Ugwema umbhede wekati owenziwe yi-Bayer Animal Health division ekhethekile ekukhiqizeni izixazululo ezinambuzane zezilwane. Zisebenza ngokuphumelelayo ekunciphiseni kokubili izinambuzane zangaphandle zekati (izibungu, izibhamu), kanye nezingaphakathi (helminths). Futhi-ke sizohlaziya ngokuningiliziwe izindlela zendlela yommeli.
Bazokubonga! Yeka kanjani ekhaya ukuletha amafere emakati
Kungenzeka kube nzima manje ukuthola umndeni lapho kungekho ikati, ngoba ngaphandle kwekati yincandane! Basinika inkathazo enkulu, baqeda iphepha lodonga, bavuka ebusuku, bashaya isoseji etafuleni, kodwa sisabathanda futhi ngeke sicabange impilo yethu ngaphandle kwezintandokazi zethu zokuhlanza. Okubomvu nokumnyama, okumhlophe nokubomvu, okwesibhakabhaka nobushelelezi, amazambane aphuzi ombhede namakati ahamba ngokwawo - yizo zonke izintandokazi zethu!
Aphansi futhi asebenzayo! I-celandine evela emafreyini nasemikhawulweni yamakati
I-Celandine noma udoti, njengoba ebizwa ngabantu, inezakhiwo eziningi eziwusizo. Imithi eminingi iyalungiswa ngesisekelo sayo, kuhlanganise namalungiselelo e-antiparasitic yezilwane. Kusho "Celandine" kusuka emafreyini nasemikhawulweni yamakati yizidakamizwa zezilwane. "Celandine" - umugqa wezidakamizwa Ukulungiselela okufaka ama-alkaloids e-celandine - izidakamizwa ezinamandla okufanele zisetshenziswe ngokucophelela, futhi zilandele ngqo imiyalelo.
Akulimazi isilwane sakho, kodwa asikho isihe ukushaya izidumbu! Ngaphambili kwamakati: intengo nemiyalelo yokusetshenziswa
Phakathi kwezinto zokugaya igazi ezithandwayo zamakati, okusebenza kahle futhi okuphephile kuhla. Amalungiselelo anjalo kulula ukuyisebenzisa, asetshenziswa endaweni yezilwane ezimilayo futhi aqukethe izinambuzane eziqeda ukuphazamiseka okuhambisana nokubonakala kwezinambuzane ezondla igazi. Amaconsi amanje anamanzi ayingozi ngalutho empilweni yezinkukhu ezincane.
Akubizi futhi kuyasebenza kakhulu! Amafutha athamela amakati: imithetho yokusetshenziswa, kanye nokubukezwa okufushane okuhamba phambili
Uma uvuma isilwane esilungele impilo yakho, kufanele uqonde ukuthi imithwalo yomnikazi ayigcini nje kuphela ukugcwalisa isitsha ngokudla nokukhipha ngesikhathi esithile isiteyi. Ngesinye isikhathi isilwane singathola "abangane" abancane abancenga igazi abajabula ngokuhlala isikhumba somngane wabo omusha, kanye nayo yonke indlu.
I-tie enhle futhi ivikela! Amakholeji athela amakati
I-collar evela emafreyini nasemikhawulweni yamakati ilula futhi iphephile. Kwanele ukufaka ikati futhi ungakhohlwa ngezimpande. Nakuba kungelona iqiniso ngokuphelele. Ake siyiqonde kahle lo mbuzo. Indlela esebenza ngayo Ikholomu i-tape epulasitiki ene-clasp yamasentimitha angama-30 kuya kwangu-40 ubude, obhekene nezidakamizwa zokulwa nezidakamizwa.
UFennel: incazelo yesitshalo nokunakekelwa kwaso
Kungani iplamu iphenduka amaqabunga aphuzi nokuthi yini okufanele uyenze